OHADA : Ho fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana | NewsMada
OHADA : Ho fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana
Nanaovana atrikasa, omaly, ny fanadihadiana ny tokony hidiran’i Madagasikara ao amin’ny Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada). Tompon-kevitra ny Programme d’appui à l’emploi et à l’intégration régionale (Procom). Manohana ny tetikasa ny Vondrona eoropeanina. Ho fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana ataon’ny sehatra tsy miankina ny tanjona. Efa nisy fiaraha-nidinika ny amin’izany ny taona 2015, 2016, 2017, sy nandraisana anjara tamin’ny fivorian’ny Ohada ny taona 2011, tao amin’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria.
20 taona izao ny nametrahana ny Ohada tamina firenena afrikanina 14, miantoka ny lalàna eo amin’ny tontolon’ny fandraharana amin’ny fametrahana fitsipika mazava, mifanaraka amin’ny rehetra. Izay ihany koa ny miantoka ny mangarahara sy ny filaminana amin’ny asa atao. Hajoro ny fitsarana mahaleo tena sy azo antoka momba izany, manome toky ireo mpampiasa vola rehetra, Malagasy na vahiny.
Hazavaina manokana momba izany ny fanjakana, indrindra ny aty Afrika mampiasa ny teny frantsay, araka ny fanadihadiana nataon’ny mpahay lalàna iray, Ferdinand Aho. Misy ihany koa ny tsara ho fantatra rehetra mifanandrify ho an’ny mpandraharaha, mpitsara, mpisolovava, mpanolotsaina amin’ny lalàna, ivontoerana mifandray amin’ny sehatry ny toekarena sy ny fihariana.
70 ireo nandray anjara tamin’ny atrikasa avy amin’ny orinasa, mpisolovava, mpitsara, fanjakana. Niarahan’izy ireo nifanakalo hevitra momba ny Ohada aty Afrika, ny fahitan’ny Ohada ny zava-misy eto Madagasikara, sy ny lalàna malagasy momba ny varotra. Nanokatra ny atrikasa ny avy amin’ny minisiteran’ny Fitsarana, nandray anjara tamin’ny fitenenana ny avy amin’ny Sim, Gem, EDBM, Vondrona eoropeanina.